Phonononga ooVimba-Funda ukuRhweba
Ijongise phi iDeFi: Ukujonga ngokukhawuleza
Nangona i-DeFi (i-decentralized finance) iye yaba yinto eqhelekileyo kwihlabathi lezemali kutshanje, abaninzi abayazi ngokupheleleyo ukuba yintoni okanye bayiqonde.
Ke yintoni kanye kanye iDeFi? Ngamafutshane, imali yokwabela amagunya yinkqubo yezemali enxuseneyo apho phantse nabani na naphina emhlabeni anokufikelela kwizicelo neenkonzo ezinatyisiweyo. Ngaphezu koko, iqonga linika ukufikelela kubasebenzisi ngaphandle kwesidingo sokunikezela ngolwazi lwabo lobuqu ngelixa begcina ulawulo olupheleleyo lweemali zabo. Xa kuthelekiswa nenkqubo yebhanki yangoku, iDeFi ngokungathandabuzekiyo iiligi ezizayo, nto leyo echaza ukuba kutheni abaninzi bayibiza ngokuba yimali yexesha elizayo.
Ngezemali zemveli, iimali zakho ayizizo ezakho ngokupheleleyo ngokwesiqhelo. Kwakhona, awukwazi ukufikelela kwiinkonzo zemali kule ndawo ngaphandle kokuzalisekisa ezinye iimfuno ze-KYC.
I-DeFi iyakwenza ukuxhasa ngemali oko kwenziwe yi-Intanethi kuLwazi
Ngaphambi kokufika kwe-intanethi, ulwazi luhlala kunye ne-elites kunye ne-savvy, eyayilawula ukuhamba ukusuka phezulu ukuya phezulu. Nangona kunjalo, i-intanethi yaphula loo nyaniso, yenza ukuba ulwazi lufikeleleke kuye nabani na naphi na.
Namhlanje, imali ihlala ngaphakathi “iikheji” kwaye ilawulwa ngabaphezulu kanye njengokuba ulwazi lwalunjalo. Nangona kunjalo, i-DeFi iya kuphula le nyani. Le nkqubo yezemali ayinamkhethe, ayinamkhethe, kwaye inceda bonke ngokulinganayo. Oko kwathiwa, owona mqobo mkhulu ekungeneni lulwazi.
Nangona kunjalo, i-DeFi ayifuni ulwazi oluthile lwe-esoteric okanye ukuba uqonde iikhontrakthi eziyinkimbinkimbi okanye i-cryptographic protocols ukuze uzibandakanye nolu shishino.
Okokugqibela, njengoko inkqubo yezemali yolwandiso lwendalo ikhula kwaye ikhula, iiprothokholi ezingcono kunye neenkonzo ezikhawulezayo ziya kulawula imini. Oko kuthethiweyo, iDeFi lelinye lawona macandelo angasetyenziswanga kakhulu anamandla angakholelekiyo akwaziyo ukwakha ubutyebi kwaye anike ulawulo olungathintelwanga lwemali.
tags imali ekhutshwayo, Defi, Review
Ukuqonda i-DAO yoTyalo-mali (uMbutho oZimeleyo oMiselweyo)
I-decentralized autonomous organisation (DAO) ngumbutho omelwe zizikhokelo ezifakwe kwiikhowudi kwiprogram yekhompyutha, kwaye ilawulwa ngamalungu ombutho kwaye ikhuselekile kwimpembelelo yangaphandle.
Kwi-DAO egxile kutyalo-mali, abatyali-mali abaninzi badibanisa iingxowa-mali ezisingise kwinjongo yotyalo-mali ngamxhelo mnye. Injongo inokubandakanya utyalo-mali kuqaliso, ulungiselelo lwezibonelelo, okanye ukuthenga ii-NFTs. Ngee-DAO zotyalo-mali, injongo idla ngokuba nkulu kakhulu ukuba nabani na akwazi ukuyiphumeza eyedwa. Oku kuzisa engqondweni i-mantra ye-DAO eqhelekileyo ethi: “Ukuba ufuna ukuhamba ngokukhawuleza, hamba wedwa. Ukuba ufuna ukuya kude, hambani kunye. ”
Kwi-DAOs yotyalo-mali, amalungu athenga amathokheni edijithali, njengokuba abatyali-mali bathenga njani izabelo kwinkampani yoluntu, ebanika ilungelo lobunikazi okanye amalungelo okuvota. Kwezinye iimeko, la mathokheni afunyanwa ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa negalelo lomsebenzi kwiprojekthi.
Ngelixa abanye abaxhasi be-DAO bexoxile ukuba yonke into malunga ne-DAO kufuneka isasazwe. Nangona kunjalo, imbali iphakamisa ukuba ukugqithiswa ngokupheleleyo kwi-blockchain akufezeki. Nokuba ubunini beprojekthi bunatyisiwe ngokupheleleyo, iprojekthi isafuna iqela elisebenza kwaye ligcine inkqubo. Ngokufana nendlela inkampani efuna ngayo abasebenzi ukugcina imisebenzi ihamba kakuhle.
I-MetaCartel Ventures: Phaya Phezulu kwe-DAO Khetha
I-MetaCartel Ventures ngumzekelo we-DAO esekelwe kwiqela eliphumeleleyo kwimarike namhlanje. Umbutho uquka iqela labaphuhlisi abakumgangatho ophezulu kunye neqela labatyalo-mali bangaphandle ukulinganisa.
I-MetaCartel yi-DAO yotyalo-mali equka abantu abafuna ukutyala imali kwiiprojekthi zenoveli eziphuhliswe kwi-Ethereum blockchain. Endaweni yokuthembela kumthamo wabo wotyalo-mali, eli qela labatyali-mali lidibanise imali kunye nonxibelelwano, libanika umda ekufumaneni nasekutyaleni imali kwiiprojekthi eziphezulu ze-blockchain.
Njengemizi-mveliso yemali eyinkunzi yemveli, amalungu eMetaCartel afumana iiprojekthi ezithembisayo, avavanye amathemba ezi projekthi, kwaye abeke isigqibo sotyalo-mali ngevoti. Enkosi kwinani elikhulu lamalungu alo mbutho, iiprojekthi zotyalo-mali ezilindelekileyo ziyaphononongwa ngobuchule.
I-MetaCartel ithathe inxaxheba kwimijikelo yenkxaso-mali yokuqala yeeprojekthi ezininzi ezidumileyo ze-blockchain, kubandakanya iZapper Finance, PoolTogether, kunye neRarible.
Ubulungu kwiMetaCartel buza ngamanqanaba amathathu. Ziquka:
Ezi zifana nabaphathi okanye amaqabane ngokubanzi njengakwiinkampani zemveli. IiMages zibandakanyeka kwi-nitty-gritty yombutho, kwaye izikhundla zabo azikho ngokusisigxina ukukhuthaza ukutsha kunye nokhuphiswano.
Ezi zifana namaqabane alinganiselweyo njengeenkampani zemveli. Bangatyala imali kwi-DAO kodwa abanasibophelelo sokubandakanyeka kwimisebenzi yemihla ngemihla.
Ezi zifana neekontraka okanye abasebenzi njengeenkampani zemveli kwaye ziququzelela imisebenzi yezomthetho, yobufundisi, okanye yolawulo ye-DAO.
Ngokugcina esi sakhiwo sobulungu esinamanqanaba amathathu, iMetaCartel idibanise ngempumelelo ezona hlabathi zimbini-eziphakathi kunye nokwahlulwa-phantsi kwenkqubo yayo.
Ngokwenza olu luhlu lobulungu lunamanqanaba amathathu, iMetaCartel izama ukulinganisa ezona zizwe zehlabathi: amaqela abekwe embindini kunye namaqela abekwe kurhulumente.
tags block Chain, I-DAO, Ulawulo oluzimeleyo loLuntu, Review
IMigodi yeCrypto elula ngeHelium: Konke okufuneka ukwazi
Ngo-2013, umqambi odumileyo u-Shawn Fanning waseka i-Helium (HNT), iprojekthi entsha ekukholelwa ukuba iphambi kwexesha layo de kufike i-crypto boom. I-Helium ngokuqinisekileyo yenye yezona tshaneli zikhawulezayo nezilula zokufumana i-crypto ngokwenza imigodi.
Ukwembiwa kwemigodi kusetyenziswa i-Helium kunokonga amandla ngendlela emangalisayo njengoko usenokwenza umgodi we-crypto usebenzisa umlinganiselo ofanayo wamandla onokuwathatha ukukhanyisa ibhalbhu ye-5-watt. Ukuthetha kwisiganeko se-NYC esine-Hardwired kwi-2014, umququzeleli we-Helium uSean Carey wachaza umsebenzi weprojekthi, ephawula ukuba:
"I-Helium yakha isiseko somzimba esenza ukuba kungabi buhlungu kwaye kungabizi kakhulu ukufumana izixhobo ezihlakaniphile kwi-intanethi kunye [nokutshintshana] idatha ngaphandle kokubotshelelwa kwizinto ezinzima ze-hardware kunye neeprothokholi."
UCarey wongezelela ukuba iHelium ijolise kuyo "ukubeka izinto kwi-intanethi" ngothungelwano lwe-mesh olunqumla izixeko. Ukusukela ngo-2014, le projekthi yayineebhulorho zehardware ezinokuqhagamshela ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezilishumi ukusuka kude. Ukongeza, ibhulorho nganye inokusebenza malunga nezixhobo ezisebenzayo ezingama-64,000.
Ukuqonda indlela iHelium esebenza ngayo
Oko kwathiwa, i-Helium yimveliso yeengcamango ezifanayo eziqhuba ishishini le-crypto namhlanje; ukusungula izinto ezintsha ezinatyisiweyo. Iqela elixhasa le projekthi ivelisa indlela yokudlula iteyiphu ebomvu ethintela kakhulu iinkampani zonxibelelwano.
I-frequency yokusebenza esetyenziswa yinethiwekhi ye-Helium ikhululekile kwiilayisensi kunye nezithintelo zolawulo. Inethiwekhi ye-HNT isebenzisa i-plug-and-play iteknoloji eyaziwa ngokuba "LongFi." Nangona kunjalo, izinga lokwamkelwa kwe-Helium liye labandezeleka ngenxa yokunqongophala kwenkuthazo ngo-2014 ngenxa yobume benoveli yetekhnoloji. Ngombulelo, i-crypto boom yafika kanye ngaphambi kokuba i-Helium iphelelwe lishishini.
Ukukhawuleza ukuya kuJuni ka-2019, xa i-Helium yayisungule izixhobo zayo zokuqala ze-hotspot ye-minener, eziza kunika amandla iziseko zayo ze-IoT zoontanga. Kuphela kwinyanga emva koko, i-Helium yakhupha uphawu lwayo lwendalo olubizwa ngokuba yi-HNT.
I-HNT iye yaba yenye ye-cryptocurrencies ephezulu ye-50 esekelwe kwi-capitalisation yemalike, kunye nexabiso elimalunga ne-4.3 yeebhiliyoni zeedola (idatha yexesha lokushicilela).
Oko kuthethiweyo, iHelium ivumela abantu abanomdla ukuba babe ngababuki zindwendwe kwaye baqhube iindawo zabasebenzi basezimayini kwiindawo zabo zokusebenza okanye kumakhaya abo kwaye bafumane umvuzo onesidima we-HNT.
I-Hotspot yeMigodi yeHelium
Cinga ngee-hotspots zomgodi we-Helium njengee-router ezisetyenziswa kwi-WiFi. Nangona kunjalo, ii-hotspots zihambisa iimpawu ze-LongFi endaweni ye-WiFi. I-LongFi inika i-Helium uluhlu loqhagamshelwano lwe-200x olubanzi kunolo lwe-WiFi. Abasebenzisi abaninzi bothungelwano basebenzisa i-LongFi kwimisebenzi eyahlukeneyo eyahlukahlukeneyo, kuquka ii-scooters zokulandelela kunye ne-trap yempuku.
Isebenza njani i-HNT Mining
Ukombiwa kwe-HNT yinkqubo ethe ngqo. Abamkeli abanomdla bambamba i-HNT kwaye bagcine ukhuseleko lwenethiwekhi, ngelixa amashishini kunye nabaphuhlisi basebenzisa inethiwekhi ye-Helium ukudibanisa izixhobo kunye nokwakha izicelo ze-IoT. Nje ukuba isebenze kwaye iqhuba, ababuki zindwendwe akufuneki benze nantoni na eyenye njengoko ii-hotspots ziphethe phantse yonke into.
Inethiwekhi ibona ingeniso evela kumashishini okusingatha kunye nabaphuhlisi abasebenzisa i-Helium ukuphuhlisa ii-apps ze-IoT. Aba baphuhlisi bahlawula iintlawulo zentengiselwano yokuhanjiswa kwedatha yabucala engenazingcingo kwiqonga. Namhlanje, abaphuhlisi basebenzisa inethiwekhi yeHelium ukulandelela phantse yonke into nayo yonke into.
tags Cryptocurrency, Helium, HNT, Review, Uhlalutyo lobuGcisa
I-Faucet Faucet: Eyona ndlela ilula yokufumana iMivuzo ye-Crypto yePassive
Ukuba ukhe wazibuza ukuba ungayifumana njani imali yedigital ngaphandle kokuthengisa, ukutyala imali, okanye ukumbiwa kwemigodi, ke eli nqaku kufuneka likubeke kwelinye lezona ndlela zilula zokufumana i-crypto-ii-Faucets.
Ukuqonda iifayile ze-Cryptocurrency Faucets
Iimpompo ze-Crypto ziiapps okanye iiwebhusayithi apho isixa esincinci seasethi ze-crypto zisasazwa njengomvuzo wokugqiba imisebenzi elula. Ezi ziqonga zihamba ngoompompo kuba iingqekembe zemali ezikhutshiweyo yimizuzu emifutshane, njengamathontsi amancinci amanzi asuka kumbhobho ovuzayo.
Ukufumana umvuzo we-crypto kwiipompo, abathathi-nxaxheba kufuneka bagqibe imisebenzi elula, njengokujonga iintengiso, ukubukela ividiyo zeemveliso, ukuphendula imibuzo, ukuvula amakhonkco, okanye ukugcwalisa i-captcha. Uninzi lwamaqonga lubonelela ngemivuzo ngokobunzima bomsebenzi ophantsi.
Oko kwathethi, amaqonga amaninzi anemilinganiselo yokubhatalwa encinci. Kule meko, amabhaso amancinci aqokelelwa kwisipaji esikwi-Intanethi. Abasebenzisi banokurhoxisa kuphela emva kokuba iingqekembe zabo eziqokelelweyo zifikelele kwinqanaba elichaziweyo. Ngezinye iimpompo, oku kungathatha usuku nje, kunye nezinye ezininzi, kunokuthatha ixesha elingaphezu kweveki.
Yintoni ekule nto kwiNkampani Ebangela ukuba kusebenze iipompo zeDijithali yemali?
Ngelixa i-cryptocurrensets ibe ligama lekhaya kwihlabathi lezezimali, uninzi lwazo alufumananga kwinqanaba eliphambili kwaye alaziwa ngabantu abaninzi kwihlabathi liphela.
Oko kwathethi, ngokunika iingqekembe zasimahla kubantu abangahleliyo kwihlabathi liphela, inkampani yokubamba ijolise ekwaziseni uluntu ngemveliso yalo kunye nokutsala abatyali mali.
I-Bitcoin Faucet edumileyo
Ngo-2010, umphuhlisi weBitcoin uGavin Andresen wavelisa itompu yokukhupha ii-BTC ezintlanu (ewe, zintlanu!) Abagqatswa abaphumeleleyo. Uluvo olungemva kwalo yayikukudala ulwazi ngeBitcoin, into engacacanga ngelo xesha.
Namhlanje, iimpompo ezininzi zikulungele ukukhupha iingqekembe zasimahla kubathathi-nxaxheba abanomdla. Amanye amaqonga ompompo ompompo abandakanya iFreebitcoin, iCointiply, iBitni Aliens, iTeyipu yeCrypto, itephu yomlilo, iCoinpayu, iBTCClick kunye neSatoshi Quiz.
tags Bitcoin, Zemali, Cryptocurrency, Review
I-Airdrop kunye ne-Earn-to-Learn: Iinkqubo ezinomvuzo ezikhawulezayo nezilula
Njengoko ishishini le-cryptocurrency liqhubeka nokukhula, kuye kwanda ngokulula ukwenza imali nokuba kungokutyala imali, ukurhweba (ukuthelekelela), ukumbiwa kwemigodi, okanye ukuzibandakanya ekufumaneni / ekufundeni nakwiinkqubo zeAirdrop-kugxilwe kweli nqaku.
Ufumana njani uMsebenzi wokuFunda
Uninzi lwamaqonga e-crypto, kubandakanya ezimbini zeenkampani ezinkulu ze-cryptocurrency, CoinMarketCap kwaye Coinbase, bonelela ngeenkonzo zokufumana imfundo yokufunda apho abathathi-nxaxheba bahlawulwa ukuze bathathe izifundo ezimfutshane ezisekwe kwi-crypto.
Ukuthatha inxaxheba kule nkqubo kubandakanya amanyathelo amathathu alula:
Bukela iividiyo ezimbalwa ezimfutshane
Thatha imibuzo ngokukhawuleza
Yinto elula nje leyo!
Ukuqonda i-Crypto Airdrop
Okwangoku, iAirdrop Chasing yenye indlela ekhawulezayo nelula yokufumana umvuzo kwishishini le-crypto. Amaxesha amaninzi, abaphuhlisi beprojekthi airdrop tokens (banike imali simahla) kumaqela anomdla athatha inxaxheba kwimisebenzi embalwa elula yokuvelisa i-buzz yeprojekthi entsha.
Eminye imisebenzi efunwa zezi projekthi ibandakanya:
Ukulandela amajelo abo eendaba ezentlalo
Ukwabelana ngezithuba kwimidiya yoluntu
Ukubhalisa kwiqonga labo
Ukuzalisa ifom malunga neprojekthi
Ukukhuphela usetyenziso lwabo
Ngenxa yokuba abathathi-nxaxheba kwii-airdrops beza ebhodini kwinqanaba lokuqala leprojekthi, izibonelelo ezinokubakho ziyamangalisa. Uninzi lwabathandi be-crypto baye baba ngoosozigidi ngokuthatha inxaxheba kwii-airlrop ezilula.
Emva kokuba iiprojekthi ezibhabhiswe ziinqwelo moya zitshintshile, abanini banokuthi bathathe isigqibo sokurhweba okanye batshintshe iithokheni ezifumanekileyo.
Ethetha ngezibonelelo ze-airdrops, uSihlalo weCoinDesk, uMichael Casey, wathi kubalulekile ukuba kuthengiswe ngomsindo umqondiso ukuba uza kuphumelela, wongeza ukuba: “Imali ayisiyonto ukuba ayisetyenziswa ngokubanzi. Kwaye oko akunakufezekiswa ngaphandle kokuba abantu benze iinzame zokufumana iindleko ukukhuthaza ukusetyenziswa ngokubanzi. ”
Nangona kunjalo, amaqela anomdla kufuneka aqinisekise ukuba awarhwaphazelwa, njengoko ukubhabha ngenqwelomoya kuye kwaba sisixhobo sobuqhetseba esidumileyo kwisithuba se-crypto. Abanye babanini beenqwelomoya ngokunyanzela ukunyusa ixabiso leenkqubo zabo kwaye bazilahle ukuze benze ingeniso ekhawulezileyo, beshiya abathathi-nxaxheba kufutshane neethokheni ezingenaxabiso.
tags I-Airdrop, Cryptocurrency, Ukufunda-ukufunda, Review
Ukubetha -Ukuthengiswa kweBitcoin kwisantya sombane
Kwangoko kulo nyaka, uJack Mallers, umseki we Bitcoin itransekshini ye-transaction app yabhengeza ukuba umkhombe uSalvador ukhethe inkampani yakhe njengeqabane eliphambili kuhambo lwabo lwe-Bitcoin Adoption.
Ukubetha kuye kwafumana ukuqondwa okubalulekileyo njengenye yezona zinto zintengiso zeBitcoin kwintengiso namhlanje. Abanye abahlalutyi baqikelele ukuba uStrike, ngokwandiswa kokumkelwa kwe-BTC, unokuqhayisa abasebenzisi abayi-1 yezigidigidi kule minyaka ilishumi izayo.
Ngale nto, uqala ukuqonda ukuba kutheni i-El Salvador idibene neli qonga kwinto uninzi lwabiza ngokuba nesibindi seBitcoin kulo nyaka. UJeff Wilser, umbhali eCoindesk, wathetha ngento awayeziva ngathi sisizathu sokuhamba kwe-El Salvador, esithi:
“Le nto khange yenzeke kuba amafama ase-El Salvador anethemba lokuba imali yawo eseBlockfolio izakuya 'enyangeni.' Oku akuzange kukhuthazwe ngamaphupha engxowa-mali yesalathiso se-BTC. Oku kwakungekho malunga nokuqikelela kwexabiso. Kwisizwe esine-70% yoqoqosho lwemali, abantu belali kunye namafama basebenzisa i-bitcoin, bethumela imali encinci yeesatanis (okanye 'iisats') ukuthenga iziqhamo kunye nemifuno, besamkela umbono wokuqala woontanga babo oya kwenza uncumo lwenene lukaSatoshi. ”
Amahlakani e-El Salvador nge-Strike yokuXhasa ukuThunyelwa kwemali
Into enomdla kukuba, ngaphambi kwesibhengezo esisemthethweni sikarhulumente waseSalvador sokuba amkele iBitcoin njengethenda esemthethweni ecaleni kwedola, ilizwe libhale ukwamkelwa okukhulu kweBTC ngeStrike.
Iingxelo zibonisa ukuba malunga ne-70% yabantu baseSalvador abanazo iiakhawunti zebhanki. Oko bekuthethile, iakhawunti yentlawulo ye-24% yemveliso yasekhaya ye-El Salvador, kwaye isixa esikhulu sale ntlawulo siya kwintlawulo yentengiselwano.
Nge-Strike, ukuthengiselana kubiza kancinci kwaye kuyakhawuleza kuneendlela eziqhelekileyo, ezichaza ukuba kutheni urhulumente waseSalvador ekhethe iqonga. Ngo-Matshi, iqonga lokuhlalutya uChainalysis uxele ukuba ukudluliselwa kwe-BTC phantsi kwe- $ 1,000 ukuya e-El Salvador kufikelele kwizigidi ezi-2.5 zeedola ku-Strike kuphela.
Ngombulelo kumandla ayo okuhlawula imali kwiimali zalapha ekhaya kunye neenkonzo zayo ezingabizi kakhulu kwaye ezikhawulezayo, ayimangalisi into yokuba i-El Salvador idibene neStrike.
Ngaba iStrike siLungiselela njani ukuHanjiswa okuKhawulezayo kunye neXabiso eliphantsi?
Ukubetha kusebenza ngendlela eyenzeka ngayo ngenxa yenqaku layo loMbane weNethiwekhi (LN). Imisebenzi yeNethiwekhi yoMbane njengebhlokhi eyahlukileyo eqhuba ukuthengiselana "Ngaphandle kwetyathanga" ngokusebenzisa uthungelwano olusasazekileyo kwiindawo kunye nokurekhoda oku kuthengiswa kweyona blockchain iphambili kwiibhetshi. Ngokwenza njalo, i-LN inciphisa intlawulo yokuthenga ukuya kumanqanaba asezantsi kakhulu.
Oku kwenza iStrike ukhetho lokuya kwintengiselwano ye-Bitcoin ekhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi. Abanye abahlalutyi bayithathela ingqalelo le ntengiselwano ye-BTC njengeyona ndlela ingcono yokusingatha imicimbi xa kuthelekiswa notshintshiselwano nge-imali yedatha, kuba ixabiso layo liphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, le nkonzo ikhona kuphela kwi-BTC.
Oko kwathethi, iqela elingemva kweStrike lityhile ukuba amanqaku amaninzi eza kwi-app ukuvumela iimeko ezininzi zokusetyenziswa, kubandakanya ukufumana iintlawulo ze-BTC, ukujikeleza ukonga kwe-BTC, kunye nezinye ezininzi.
tags Bitcoin, BTC, Network Lightning, Review, Ukubetha